हाकिमसँग ओ छ्या न तताउन जान महिला प्रहरीले छोरीलाई भ्यानमा को’चिन् फर्किदा मृ त्यु भइसक्छ ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/हाकिमसँग ओ छ्या न तताउन जान महिला प्रहरीले छोरीलाई भ्यानमा को’चिन् फर्किदा मृ त्यु भइसक्छ !
हाकिमसँग ओ छ्या न तताउन जान महिला प्रहरीले छोरीलाई भ्यानमा को’चिन् फर्किदा मृ त्यु भइसक्छ !
काठमाडौं । भौ’तिक सु’ख प्राप्त गर्नका लागि महिलाहरु के सम्म गर्न सक्छन् त्यसको एक दर्दनाक घटना बाहिर आएको छ । अमेरिकाको मिसिसिपीमा एउटा आश्चर्यजनक घटना बाहिर आएको छ । त्यहाँको लांगबीचमा एउटी आमाले आफ्नी छोरीलाई प्रहरीको भ्यानमा छोडेर जे गरिन् त्यसले सबैको होस उडाएको छ ।ति महिला आफ्नो हाकिमसित भौ’तिक सु’ख पाउनका लागि छोरीलाई भ्यानमा कोचेर आफु हाकिमसँगै घरभित्र जान्छिन् । घरमा सम्पर्क राख्दा केही समय बिताएकी महिला ढिला आउँदा छोरीलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि मृत्यु भैसकेको हुन्छ ।
घटना ३० सेप्टेम्बर २०१६ मा भएको हो, जब कासि बार्कर नाम गरेको महिला प्रहरी अधिकारीले उनको छोरी शेनलाई कारमा थुनेर उनको हाकिमसँग ओछ्यान तताउन उनको घर भित्र गइन् । जब महिला प्रहरी चार घण्टा पछि फर्किइन्, तब उनले आफ्नो छोरीको शरीरको तापक्रम धेरै उच्च भएको थाहा पाइन् ।
जानकारी अनुसार महिला प्रहरी अधिकारी र उनको हाकिमबीच सम्बन्ध कायम गरेपछि घरभित्रै निदाएर ४ घण्टापछि फर्केका थिए । जब बार्कर फर्किइन्, तब उनले आफ्नो छोरीको कुनै चाल पत्तो पाइनन् । द वाशिङ्गटन पोष्टको एक रिपोर्टमा भनिएको थियो कि प्रशासनले छोरीको मृत्यु हुनु अघि उनको शरीरको तापक्रम १०७ डिग्री पुगेको बताएको थियो ।यद्यपि यो अस्पष्ट छैन कि बार्करले जानाजानी आफ्नो छोरीलाई कार (प्रहरी भ्यान) भित्र राखेकी हुन् वा अन्जानमा राखेकी हुन् ? ३० वर्षीया बारकरले अदालतमा आफुविरुद्ध छोरीको मृत्यु अभियोगमा दर्ता भएको मुद्दा खारेज गर्न माग गरेकी थिइन् ।
ह्यारिसन काउन्टी सर्किट न्यायाधीश ल्यारी बोर्जोईले बार्करलाई भने, ‘मलाई थाहा छैन म तपाईंसँग के गर्न सक्छु जुन तपाईंले पहिले नै अनुभव गरिसक्नु भएको भन्दा खराब छ ।’ बिलोक्सी सन हेराल्डको एक रिपोर्ट अनुसार बार्कर मृत्युको मुद्दामा दोस्रो डिग्री सजायबाट बच्‍यो किनकि उनले अदालतमा आफ्नो कर्तुत स्वीकार गरेकी थिइन् ।
अभियोजकले पक्षको बार्करलाई २० बर्षको सजायको माग गरेका थिए । एपीको रिपोर्ट अनुसार बार्कर र उनका हाकिम क्लार्क लेडनरलाई छोरीको मृत्यु भएपछि जागिरबाट बर्खास्त गरियो । यद्यपि लेडरले कुनै शुल्कको सामना गरेन किनकि उनले प्रशासनलाई बताइसकेका थिए कि उनलाई बारकरकी छोरी कारमा छिन भनेर थाहा थिएन् ।
शेनका बुबा र्यान हेयरले उनकी छोरीको मृत्युले उनलाई धेरै बर्षदेखि चिन्तित गरिरहेको बयान दिएका थिए । उनले भने, ‘जब म मेरा आँखा बन्द गर्दछु, ऊ पीडामा देखिन्छे र त्यसपछि ऊ लाशमा पल्टिएको देखिन्छ । म अझै उनको हाँसो र मुस्कान महसुस गर्छु । मलाई लाग्छ कि त्यसबेला उनको मुस्कान र हाँसो दुःख र कष्टमा परिणत भएको थियो ।’
सुन्दरी युवतीले गरिन् कुकुरसंग बिहे,कारण सुन्दा सबै चकित।पुरा हेर्नुहोस